Tsy nisy naheno ny teo amin’ny manodidina. Tsy fantatra ihany koa hatreto izay nahavanon-doza. Efa niampatra teo ambony seza no hitan’ny rainy, izay manamboninahitra kolonely, ny fatin’ilay zanany lahimatoa.
« Nitsabo tena taty an-drenivohitra izy nandritrany 15 andro. Tapitra omaly izany ka nikasa handeha hiverina izy. Nifanaraka izahay mianaka fa izao no manatitra azy any amin’ny Fasana karàna, haka fiara mpitatitra hihazo an’Antsirabe amin’ny 9 ora maraina. Nanomboka tamin’ny 10 ora aho no niantso azy dia niteny izy fa efa vonona. Tonga aho ny antoandro tokonyy ho tamin’ny 12 ora nitaraina noana sy ny zokiny iray mianatra eny Ankatso no hitako ka nomeko vola handeha hisakafoanan’izy ireo any am-pianarana », hoy ny kolonely Etono Zafifeno Mamy Marco Michel ilay maty. Niverina namonjy ny asany eny Ampahibe ilay kolonely taorian’izay, araka ny fitantarany.
« Tokony ho tamin’ny 3 ora mahery no niantso ahy indray ny vadiko nilaza ny mba hijerena ilay zanakay sao maninomaninona ao an-trano, noho izy tsy aza tamin’ny finday mihitsy. Vao avy narary rahateo izy. Tamin’ny 3 ora sy sasany aho no tonga tao an-trano. Nojereko tany amin’ny efitra nisy azy izy izay efa nipirina tsara. Nojereko tao amin’ny efitranon’ny zandriny sao nilalao solosaina tao nefa tsy tao ihany koa. Tao amin’ny efitra fandraisam-bahiny izy no hitako mitsilany eo ambony seza. Rehefa notsapaiko dia tsy mitempo intsony ny fony. Teo amin’ny fony no voatifitra. Tsy hita ihany koa ny basy nampiasaina », hoy ihany ilay kolonely.
Nilaza ny hametraka fitoriana ho an’olon-tsy fantatra ilay kolonely. Nilaza ihany koa izy fa tsy nahatsikaritra na inona na inona mihitsy ireo teo amin’ny manodidina. 28 taona ity tovolahy maty ity.